'Dhimmi koo dhimma dhaabaa qofa miti' - Dr. Nagaasoo Gidaadaa - BBC News Afaan Oromoo
Goodayyaa suuraa Dr. Nagaasoon mana mootummaan duraan kenneef keessaa bahi jedhamanii turan
Tibbana walgahii idilee irra kan jiru koreen Jiddugaleessaa DhDUO, Pireezidantii Itoophiyaa duraanii kan turan Dr. Nagaasoo Gidaadaa faayidaalee gara garaa akka argatan murteesse.
Dr. Nagaasoo Gidaadaa Pireezidantii Mootummaa Riippabliika Federaalaa Diimookraatawaa Itoophiyaa jalqabaa ta'uun A.L.I bara 1987 ture gara aangootti kan dhufan. Waggoota torbaaf pireezidaantummaan tajaajilaniiru.
Aangoo gadi dhiisanii waggaa afuriif faayidaa fi tajaajila akka pireezidantii duraaniitti isaaniif malu argataa erga turanii booda sababa dhuunfaan dorgomanii paarlaamaa seenaniif faayidaa isaaniif malu hunda dhaban.
Koreen jiddugaleessaa DhDUO maallaqni harkatti akka kennamuuf, tajaajila fayyaa biyya keessaafi biyya alatti bilisaan akka argataniifi konkolaataan akka bitamuuf murteessuu isaa dubbatu Dr. Nagaasoon.
"Waggoota 13 boodas ta'u itti dhagaahamee murtee kana murteessuu isaaniitiif hogganootaafi miseensota DhDUO nan galateeffadha," jedhu Dr. Nagaasoon.
"Kana jechuun garuu, dhimmi koo dhimma dhaabaa qofa miti, akka pireezidantii biyyaatti mirgi ani qabu naa kabajamuutu irra ture, dhimma kanaaf kan itti gaafatamuu qaba jedhe amanu mootummaa federaalaa Itoophiyaati," jedhu.
Dr. Nagaasoo Gidaadaa miindaa sooramaa ji'atti qarshii 2295 argachaa turan.
Seerri jalqaba ittiin na adaban fooyya'eera kan jedhan Dr. Nagaasoon, manni maree bakka bu'oota uummataa federaalaa fi mootummaan federaalaa dhimma koo irra deebi'ee ilaaluu qaba jedhu.
Viidiyoo Pireezdaantonni Itoophiyaa duraanii lameen akkamitti jiru?